Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Barzakh on Mac
> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado ah Barzakh, Lost in Mac
Sida wax System kale Operating, nidaamka Macintosh Operating ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah drives macquul ah ama maqaal qoruhu degaanka sida:
• HFS + (File System jaranjaro)
• HFS (File System jaranjaro)
Sababaha keenaya Common qoruhu lumay ama la waayay
Waxaa jira had iyo jeer waa xaaladda dhacaya in file ee Mac lumo, si qalad ah la tirtiro, ama kaliya maqan. Sidaas samayn Risaalo. Risaalo ee Mac sidoo kale lagu lumin karaa ama la tirtiro, kaas oo kuu soo musiibada ka mid ah laga badiyay dhammaan faylasha badbaadiyey it on. Waxaa jira qaar ka mid ah sababaha caadiga ah ee keenaya Risaalo ka badiyay:
• Shil Hard drive
• weeraro Viral, awood-kaca
• hubin nidaamka xiritaanka
• Software musuqmaasuqa
nidaamka • File musuqmaasuqa
Habka si aad u hesho dib u qoruhu laga badiyay
Dhab ahaantii, inay dib u helaan Risaalo ka badiyay waa wax sahlan, sida 1-2-3, haddii aad dooratay Mac qalab sax ah soo kabashada xogta. Wondershare Data Recovery for Mac waa nooc noocan oo kale ah ee barnaamijka fudud qof walba dib u soo ceshano qoruhu lumay 3 kaliya tallaabooyin. Aynu qaadan day ah.
Ku rakib oo aan bilowno aad Mac. On interface ugu weyn, waxaa jira 4 fursadaha si aad u doorato, oo ka dhacay Recovery ah Barzakh, Lost, kuwaas oo kaa caawin karaan inaad hesho Risaalo ka badiyay marka hore.
Markaas waqti dheer ah ku qaadan doonto in iskaan u Risaalo ka lumay, oo ay ku jiraan oo dhan qoruhu in ka hor inta laga badiyay. Ayaa maqaal qoruhu baxey aan loo magacaabay asalka ah, si aad u go'aansato oo xijaab inuu ka soo kabsado by size waxaa ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay drive adag dibadda ku xiran aad Mac, Risaalo ka lumay ee drive dibadda adag in sidoo kale la marsiiyey doona. Sidaas darteed haddii aadan aad rabto in aad dib u soo ceshano Risaalo ka lunsan oo drives kale u adag, hubi in aanay ku xiran yihiin adiga iyo Mac.
Ka dib markii doorashada xijaab bartilmaameedka, waxaad isticmaali kartaa Options Filter in ay doortaan noocyada file aad doonaysid in aad dib u hesho. Sida user sare, waxa kale oo aad sameyn kartaa gobolka cayimay upka iyo qaybaha dhamaatay. Markaas riix Scan inuu ka soo kabsado dhammaan xogta gudaha Risaalo oo waxaan iyaga ku badbaadin on your Mac.
Video tutorial soo kabashada xijaab Mac